बार्सिलोनामा भालभर्देलाई नफापेका चार खेल, कस्ता छन् नयाँ प्रशिक्षक?
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २९, २०७६, १४:५७
काठमाडौं- स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभर्देलाई बर्खास्त गरेर नयाँ प्रशिक्षक किक्वे सेटियनलाई भित्र्याएको छ। बार्सिलोनाको ‘फुटबल शैली’लाई पछ्याउन नसकेको आरोप लाग्ने गरे पनि भालभर्देको बार्सिलोना नतिजाका आधारमा खराब भने होइन।
लुइस इनरिकपछि सन् २०१७ को मे महिनामा बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बनेका भालभर्देले सन् २०१७–१८ र सन् २०१८–१९ को ला लिगा उपाधि बार्सिलोनालाई जिताए। एक कोपा डेल रे र एक स्पेनिस सुपर कपको उपाधिसमेत जिताएका भालभर्देको शैली बार्सिलोना चलिरहेको पुरानो शैलीभन्दा भिन्न थियो। यसैले पनि बार्सिलोनाको खेलमा अभ्यस्त दर्शक उनको शैली मन नपाएर ‘भालभर्दे आउट’ को नारा लगाउँथे।
च्याम्पियन्स लिगमा गएको सिजन सेमिफाइनलमा लिभरपुलसँगको हार र त्यसअघिको वर्ष क्वाटरफाइनलमा रोमासँगको हारले चिढिएका समर्थक हरेक हारमा दोष भालभर्देलाई नै दिन्थे। जितको जस भने लियोनल मेस्सी र खेलाडीहरुलाई। यसैले नतिजाका हिसाबले ठिकै रहँदा र जारी लिगमा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा रहँदा भालभर्दे भने लखेटिए।
बार्सिलोनामा भालभर्देले १ सय ६३ खेलमा आफ्नो प्रशिक्षण परखे। जसमा बार्सिलोनाले १ सय ८ खेल जितेको थियो। ३५ खेल बराबरी गरेको थियो। २० खेल हारेको थियो। जितको प्रतिशत ६६.२५ भए पनि केही महत्वपूर्ण खेलमा भएको पराजय उनको बर्हिगमनको कारण बन्यो। त्यसमा पनि विशेष त चार खेललाई लिन सकिन्छ।
पहिलो त सन् २०१७–१८ को च्याम्पियन्स लिग खेल। जसमा क्वाटरफाइनलमा बार्सिलोना पहिलो लेगमा रोमासँग ४–० ले विजयी भएको थियो। पहिलो लेगको बार्सिलोनाको उत्कृष्ट जित दोस्रो लेगमा भने निरन्तर हुन सकेन र ३–१ ले हार्न पुग्यो। समग्रमा गोल बराबर भए पनि अवे गोलका आधारमा बार्सिलोना बाहिरियो।
दोस्रो सन् २०१८–१९ को च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल खेल। जसमा बार्सिलोनाको हविगत रोमासँगको जस्तै दोहोरिएको थियो। पहिलो लेगमा ३–० ले विजयी भएको बार्सिलोना दोस्रो लेगमा ४–० ले पराजित भएको थियो। पहिलो लेगमा खेर गएका गोलका राम्रा अवसर र दोस्रो लेगमा सम्हालिन नसकेको फुटबलले भालभर्देको खुब आलोचना भयो।
तेस्रो सन् २०१८–१९ को कोपा डेल रे। कोपाको फाइनलमा बार्सिलोना भ्यालेन्सियासँग खेलिरहेको थियो। त्यसअघि सेमिफाइनलमा रियल मड्रिडलाई समग्रमा ४–१ ले हराएर फाइनल पुगेकाले बार्सिलोनाले उपाधि जित्ने धेरैको अनुमान थियो। तर भ्यालेन्सियाले २–१ ले हराउँदै बार्सिलोनालाई स्तब्ध पारिदियो।
चौथो गएको हप्ता साउदी अरबमा भएको स्पेनिस सुपर कपको खेल। जसमा बार्सिलोना सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडसँग ३–२ ले पराजित भएको थियो। तालमेल बिग्रिएको बार्सिलोनाको खेलले महत्वपूर्ण समयमा हार हुने विगतको हविगत दोहोरिएकाले भालभर्देको थप आलोचना भयो।
एथ्लेटिको मड्रिडसँग पराजित भएदेखि नै सार्वजनिक रुपमा भालभर्देको बर्खास्तीबारे कुराहरु आइरहेका थिए। बार्सिलोनाले भालभर्देको स्थानमा जाभीलाई आउन आग्रह गरे पनि उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिँदा सिजनको अन्त्यसम्म भालभर्दे नै रहने अनुमान गरिएको थियो।
केही दिन यता बिग्रिएको माहोल र नयाँ प्रशिक्षकको सार्वजनिक खोजीले भालभर्देको बर्खास्त छिटो हुन पुुगेको बताइएको छ।
१७ वर्षअघि मात्र बार्सिलोनाले यसरी सिजनको बीचमा प्रशिक्षक लुइस भान गालको बर्खास्ती गरेको थियो। त्यसबेला लिगमा बार्सिलोनाको अवस्था खराब थियो। यसपटक भने च्याम्पियन्स लिगमा पनि अगाडि बढिरहँदा र लिगमा शीर्ष स्थानमा रहँदा प्रशिक्षक बर्खास्त भए।
कस्ता छन् नयाँ प्रशिक्षक?
भालभर्देलाई बर्खास्त गरेर ल्याइएका नयाँ प्रशिक्षक किक्वे सेटियन धेरै परिचित नाम होइन। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीको प्रशंसक रहेका सेटियन बार्सिलोनाको ‘टिकी टाका’ शैलीका पनि प्रशंसक हुन्।
सन् २०२२ को जुन महिनासम्मको सम्झौतामा बार्सिलोना आएका ६१ वर्षका सेटियन ‘बल पोसेसन’कै आधारमा बढ्ने प्रशिक्षक हुन्। एक समयका सेन्टर मिडफिल्डर सेटियनले बार्सिलोनाको पुरानो शैली फर्काउने आशमा समर्थकहरु छन्।
खेलाडीका रुपमा उनले रेसिङ सानटान्डर, एथ्लेटिको मड्रिड, लोग्रोनेस र लेभान्टे क्लबमा आफ्नो खुबी देखाएका थिए। सन् १९७८ मा स्पेन यु२१ हुँदै १९८५ देखि १९८६ सम्म स्पेन राष्ट्रिय टिमका खेलाडी रहेका सेटियन प्रशिक्षक बनेको बार्सिलोना आठौँ टिम हो।
यसअघि सेटियनले २००१ देखि ०२ सम्म स्पेनकै क्लब रेसिङ सानटान्डर, २००३ मा पोली इजिडो, २००६ मा इक्वेटोरियल गिनीको राष्ट्रिय टिम, २००७–०८ मा स्पेनकै लग्रोनेस क्लब सम्हालेका थिए। यस्तै २००९ देखि २०१५ सम्म स्पेनकै डेपोर्टिभो लुगो, २०१५ देखि २०१७ सम्म लस पाल्मस साथै २०१७ देखि २०१९ सम्म रियल बेटिस टिम सम्हालेका थिए।
संयोग कस्तो छ भने, प्रशिक्षकको रुपमा भालभर्दे रहँदा बार्सिलोनाले घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा एक खेल मात्रै हारेको थियो। जुन खेलमा रियल बेटिसले ४–३ ले हराउँदा बेटिसको प्रशिक्षक सेटियन नै थिए।